चुप ! – Stories of Sandeept
On May 5, 2018 By sandeept252In नेपाली, Nepal, Nepali, Public Interest, Satire
थाहा थियो तर चुप थियौँ । बोल्यो कि पोल्यो ! अपशब्दको वर्षा हुन्थ्यो । बोल्न खोज्नेलाई किचकिचे बनाइदिन्थ्यौँ । चुप बस्थ्यौँ । अझै पनि खुलेर बोलेका छैनौँ ।
सार्वजनिक यातायातमा अनेक सास्ती भोगेर यात्रा गरेका छौँ त्यो पनि प्रायः जसो बढी शुल्कमा । १३ रूपैयाँ लाग्ने ठाउँमा १५ रूपैयाँ तिरेका छौँ । यस्तो होइन भन्यो भने कुनै यात्रीले नै भनिदिन्छ, “दुई रूपैयाँको लागि किचकिच किन गर्‍या ?” लाग्छ, दुई रूपैयाँ त साह्रै सानो रकम हो जसका लागि बोल्नु पनि पाप हो ।
हामी सौखिन नेपालीहरूलाई सिक्का बोक्न मन लाग्दैन । १, २ रूपैयाँको नोट राष्ट्र बैँकले छाप्न छोडेको कति भो कति । सिक्कै पनि कहाँ पर्याप्त छ र ? २०६५-६६ साल यताका सिक्का मैले त भेटेको छैन । एक दुई रूपैयाँ चलाउनु छैन भने १३, १७, १९ जस्ता अङ्कमा भाडादर किन बनाउनु ?
यो भाडादर वैज्ञानिक छ । उनीहरू लुट्न खोज्छन् । हामी लुरुक्क परेर घुँडा टेक्छौँ । टेक्न नचाहनेको हात समातेरै तान्छौँ अनि झुकाउछौँ ।
हामी विद्यार्थी (म सहित) त पढेका मुर्ख नै भयौँ । यातायातमा ४५% छुट पाइन्छ तर २५% भन्दा कममा पनि रमाउछौँ । १३ रूपैयाँको भाडादरको ४५% हुन्छ ५ रूपैयाँ ८५ पैसा । तर १० रूपैयाँ तिर्छौँ । तीन रूपैयाको छुटमा रमाउछौँ । कसैलाई सोच्ने फुर्सद छैन । फुर्सद हुनेलाई अर्काको खुट्टा तान्न पाए पुग्छ ।
सरकार अहिले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीका रूपमा दर्ता गराउन प्रयास गर्दै छ । राम्रो ! तर भाडादरको कुरा अझै के हुने हो थाहा छैन । बोल्नु नपरे त झन् राम्रो ! बोल्नु पर्‍यो भने ? नानीदेखिको बानी न हो, चुप लागुँला !